अग्ला पुल - अनौठो जानकारी - प्रकाशितः फाल्गुन २६, २०७२ - साप्ताहिक
फाल्गुन २६, २०७२
भारतको जम्मु कस्मिर राज्यमा बग्ने चिनाव नदीमाथि बनाइएको रेल्वे पुल संसारको सबैभन्दा अग्लो तथा लामो रेल्वे पुल हो । नदीको सतहबाट १ हजार १ सय ७८ फिट माथि निर्माण गरिएको यो पुलको लम्बाइ ४ हजार ३ सय १४ फिट छ । यसअघि चीनको हुवेई प्रान्तको बादौन काउन्टीमा सिदु नदीमाथि बनाइएको रेल्वे पुललाई सबैभन्दा अग्लो रेल्वे पुल मानिन्थ्यो जुन १ हजार ६ सय २७ फिट अग्लो थियो ।
पपुवा न्युगिनीको हेजीजियो जर्ज नदीमाथि बनेको पाइपलाइन पुल संसारको सबैभन्दा ठूलो पाइपलाइन पुल मानिन्छ । यो पुल १ हजार ५ सय ४० फिट लामो छ । यो पुलको प्रयोग सवारी साधन आवतजावत गर्न नभै पपुवा न्युगिनीको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा रहेको मनान्दा टापुबाट खनिज तेल ओसार्न गरिन्छ ।
मेक्सिकोको कोन्कोर्डिया इन्सिनालोआ र पाब्लोनेभोलाई जोड्ने बालुआर्टे पुललाई संसारको सबैभन्दा ठूलो पिलररहित तथा तार प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको पुल मानिन्छ । यो पुल १ हजार १ सय २४ मिटर लामो छ । यो पुलबाट सवारी साधन समेत आवतजावत गर्न सक्छन् ।
चीनको ग्विझोउ प्रान्तको बालिङ नदीमा रहेको पुललाई संसारको सबैभन्दा लामो झोलुंगे पुल मानिन्छ । यो पुल १ हजार ८८ मिटर लामो छ । यो पुल सांघाई–कुन्मिङ राजमार्गको महत्त्वपूर्ण पुलसमेत हो । यो नदीको सतहबाट १ हजार २ सय ३० फिट अग्लो छ । चीनको हुनान प्रान्तमा निर्माण गरिएको आइझाइ पुललाई संसारको सबैभन्दा ठूलो त्यस्तो पुल मानिन्छ जसले दुई सुरुङलाई एकअर्कासँग जोड्छ । यो पुलको लम्बाइ १ हजार ५ सय ३५ मिटर छ भने उचाइ ३ सय ५० मिटर छ ।
प्रकाशित :फाल्गुन २६, २०७२
टाँडीमा पुल डान्स
नायिकाहरू कति अग्ला, कति मोटा ?
भोलि तीज फेसन
पाच मिनेटभित्र सिन्दुर पोते
गेट सेक्सी डान्स पार्टी
पुल डान्स पार्टीमा युवायुवती (फोटो फिचर)
अनौठो जानकारीबाट अरु
बैकाल ताल वैशाख १९, २०७३
लाटोकोसेरो फाल्गुन १९, २०७२
लाटोकोसेरो माघ २७, २०७२
ओलम्पिक पदकमा सुन हुन्छ माघ ६, २०७२
अमेरिकीहरूको सुताइ माघ ६, २०७२
हुनेखानेले चाउचाउमा सुन मिसाएर खान्छन् पुस २८, २०७२
सुन पुस १९, २०७२
हस्तमैथुनको इतिहास पुस १३, २०७२
महिलाहरू के चाहन्छन् ? पुस ८, २०७२
यौनजीवनलाई सुखी बनाउने १० टिप्स मंसिर २०, २०७२